Al Shabaab oo dib uga Laabtey deegaanno ay shalay Galinki hore la wareegeen oo ku yaala Gobolka shabeelada Hoose
Degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose Wararka laga helayo ayaa sheegaya in dagaalyahanno ka tirsan Xarakada Al Shabaab ay dib u baneeyeen deegaanada Cadow Dibille , Laanta Buuro iyo Muuri oo shalay ay kala wareegeen Ciidamada dowladda kadib markii dagaal qaraar ay ku soo qaadeen deegaanadaasi.
Walow ay jireen isku dayo shalay ay Ciidamada dowladdu ku doonayeen in ay dib ugu soo ceshtaan deegaanadaas hadana waxaa taasi suura galin weysay ka gadaal markii ay iska caabin xoogan kala kulmeen Ururka Al Shabaab.
Wararka ayaa sheegaya in Dagalyahanadii Al Shabaab ee deegaanadaasi baneeyay ay fooda soo aadiyeen dhanka Magaalada Caasimadda ah ee Muqdisho.
Ilo wareedyo ku sugan degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sheegaya in dadka ku dhaqan degmadaasi xalay uu soo food saaray qal qal xoogan kadib markii ay ka war heleen in dagaalyahanno ka tirsan Al Shabaab ay guud ahaanba hareereeyeen degmada Afgooye ee Gobolka Shabeelaha Hoose.
Si kastaba deeganaada ay saaka baneeyeen Dagaalamayaasha Al Shabaab sida Cadow Dibille , Laanta Buuro iyo Muuri aysan jirin cid ku sugan labada dhinac ee Al Shabaab iyo Ciidamada Dowladda.